Helitaanka Haqab-beelka Cunnada - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-free
Maxay ka dhigan tahay in cuntadu aanay sugnayn?
"...cuntadu waxay saamaysaa dhammaan qaybaha nolosheenna...ma garanayno inay saamayn ku leedahay dhinacyadan kale ee nolosheenna ilaa aan ka doodno."
Cunto-la'aanta ayaa weli ka sii socota Oregon, taasoo ka dhigaysa qaar badan inay la halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen cunto ku filan bil kasta. Intii u dhaxaysay 2013 iyo 2015, Oregon wuxuu ahaa gobolka kaliya ee arkay kororka cunto yarida iyo gaajada, xitaa iyadoo heerka qaranku hoos u dhacay iyo dhaqaalaha Oregon uu koray.
Waxaan aaminsanahay in dhaqdhaqaaqayagu uu ka xoog badan yahay ku lug lahaanshaha khabiirada dhabta ah-dadka la kulmay gaajo-in cilmi-baaristayada iyo go'aamadayada.
Sannadihii 2016 iyo 2017, iyada oo loo marayo 13 kooxood, waxaanu waraysannay 95 ka qaybgalayaasha SNAP ee Oregon oo dhan ina weydiinay su'aalaha:
Maxaa ka hor istaagaya ka qaybgalayaasha SNAP in ay noqdaan kuwo cunto sugan?
Sidee bay ka qaybgalayaasha SNAP ku helaan haqab-beelka cuntada?
Natiijooyinku waxay caddeeyeen in faragelino badan oo shakhsi ah, kuwa dadka dhexdooda ah, deegaanka la dareemayo, deegaanka shakhsi ahaaneed, deegaanka la dhisay iyo heerarka siyaasadda ay aad waxtar ugu leeyihiin hagaajinta sugnaanta cuntada ee ka qaybgalayaasha SNAP.
Akhriso Nuxurka Fulinta
Helitaanka sugnaanta cuntada ee Oregon oo dhan
Wada-hawlgalayaasha Oregon-ka-gaajo-la'aanta waxay aqoonsan yihiin in kuwa ay soo food saartay faqri dadka qaar ay halis aad u weyn ugu jiraan gaajo. Cunto-la'aanta waxay si aan xad lahayn u saamaysaa bulshooyinka midabka leh, soogalootiga dhawaanta soo guuray, qoysaska carruurta leh iyo gaar ahaan qoysaska ay hogaamiso hooyooyinka keligood ah, dadka naafada ah, bulshada LGBTQ iyo dadka ku nool dhulka miyiga ah ee Oregon. Kooxahan diiradda saaraya, waxaan ku dadaaleynaa inaan matalo bulshooyinka ay gaajadu saameysay si aan qiyaas lahayn.
Natiijooyinka shaqadan ee aagga Portland-Metro inta lagu jiro 2016 ayaa sidoo kale si gaar ah loo diiwaangeliyay.
Akhriso Warbixinta oo dhan
Qaado tallaabo aad ku joojinayso gaajada adigoo hadlaya